ထိုင်းရိုးရာ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ် နောက်ကွယ်က သွေးပျက်စရာ အမှန်တရားကို ရှာဖွေရမယ့် Horror ဂိမ်း "Home Sweet Home"
ခြောက်ခြားဖို့ကောင်းလှတဲ့ ထိုင်းသရဲကားတွေ၊ ထိုင်းစုန်းအောက်လမ်းကားတွေကို အနည်းဆုံး တစ်ခေါက်လောက်တော့ ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ငယ်စဉ်ဘဝကတည်းက ထိုင်းသရဲရုပ်ရှင်တွေနဲ့ တစ်ကွေ့မဟုတ်တစ်ကွေ့ ရင်းနှီးခဲ့ဖူးသူတွေအတွက်တော့ ထိုင်းတစ္ဆေသရဲတွေဟာ ဘယ်လောက်တောင်မှ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာအတိနဲ့ လူတွေကို အန္တရာယ်ပြု ခြောက်လှန့်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိရှိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။
လည်ပင်းကနေတောက်လျှောက် ဝမ်းတွင်းကလီစာတွေ တွဲလောင်းကျနေတဲ့သရဲမ Krasue၊ လူ့ဘဝမှာ ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်အောင် စုန်းအတတ်ပညာနဲ့ အသက်ပြန်သွင်းထားတဲ့ လူသားဖုတ်ကောင် Hun Phayon၊ မီးလောင်ထားတဲ့ ဦးရေပြားထက်မှာ ဆံပင်ကျို့တို့ကျဲတဲနဲ့ ထိုင်းရိုးရာဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်လိပ်ပြာကို အောက်လမ်းနည်းတွေနဲ့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ Kuman Thang၊ မီးဖွားနေချိန်မှာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး နာကျည်းချက်တွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ သရဲမ Phi Tai Thang Khom၊ အစရှိတဲ့ ထင်ထင်ရှားရှား တစ္ဆေသရဲဇာတ်ကောင်တွေအပြင် တချို့တစ္ဆေသရဲပုံပြင်တွေကိုလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအဖြစ် ပြန်လည်ဖန်တီးရိုက်ကူးခဲ့ကြလို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပရိသတ်တွေကြားမှာတောင် ဓါတ်ပုံသရဲ၊ ပိန္နဲသီးသရဲ၊ ခေါင်းပြတ်သရဲဆိုပြီးတောင် အမည်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ဘဝက ကြားသိဖူးခဲ့တဲ့ ဖျာသရဲ၊ ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးသရဲ၊ ဘုန်းကြီးသရဲ အစရှိတဲ့ သရဲပုံပြင်တွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတင်မက အခြားအရှေ့တောင်အာရှ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှာပါ နာမည်ကျော်လူပြောများကြတဲ့ ရှေးရိုးရာ ထိုင်းသရဲပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှတဝှမ်းက သရဲပုံပြင်တွေအပြင် ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းမှာရှိတဲ့ ရှေးရာစုနှစ်တွေကသရဲတစ္ဆေပုံပြင်တွေကို အခုခေတ်အခုအချိန်ထိ လူတွေသိရှိနေကြတာဟာ အဲဒီဇာတ်လမ်းတွေကို ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ၊ ဂိမ်းတွေအဖြစ် ပုံစံအမျိုးမျိုး ပြန်လည်ပုံဖော်ပြီး အသက်သွင်းခဲ့ကြလို့ပါပဲ။
သွေးပျက်လောက်စရာ Horror ဂိမ်းပေါင်းမြောက်မြားစွာရှိပေမယ့် တကယ့်အစစ်အမှန် သရဲတစ္ဆေဇာတ်ကြောင်းနဲ့ ဂိမ်းကောင်းဆိုတာ လက်ချိုးရေတွက်လို့ ရတဲ့အပြင် အာရှတိုက်ထဲကဂိမ်းဆိုရင် ပိုပြီးတောင် ရွေးထုတ်ဖို့ခက်ပါသေးတယ်။ အာရှတိုက်အတွင်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံကလွဲရင် ဂိမ်းဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ ဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားပါးတဲ့အပြင် ဂိမ်းချစ်သူပရိသတ်တွေကလည်း ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Horror ဂိမ်းတွေကို သိပြီးအားမပေးကြတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ဂိမ်းဈေးကွက်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ Horror ဂိမ်းထွက်ရှိမှု နည်းပါးလှပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အာရှတိုက်က သရဲဂိမ်းကောင်းတွေကိုမှ ကစားချင်သူများအဖို့ အခုဒီမှာ Horror ဂိမ်းသစ်တစ်ခုလာပါပြီ။ ထူးခြားတာက အဲဒီဂိမ်းကို ဂိမ်းဈေးကွက်ထဲမှာ နှာတစ်ဖျားသာနှင့်ပြီးသား အရှေ့ပိုင်းအာရှတိုက်နိုင်ငံတွေက ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းက ဂိမ်းဖန်တီးသူများအဖွဲ့က ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ လက်ရှိခေတ် ဂိမ်းဈေးကွက်ထဲကို တိုးဝင်လာတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံထုတ် Horror ဂိမ်းသစ်က ဘယ်လိုဂိမ်းမျိုးလဲ? အားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါ့မလား? အားလုံးကို ခြုံငုံပြီး သုံးသပ်နိုင်အောင်လို့ သိရှိရသမျှကို စုစည်းပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆန်းကြယ်စွာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဇနီးနဲ့ လျှို့ဝှက်တဲ့ အမည်မသိ အိမ်ပျက်ကြီး
Tim နဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာ မအိုဟောင်းသွားတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြပြီး သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို တည်ထောင်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ညမှာတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပျောက်ဆုံးသွားလဲဆိုတာ အတိအကျမသိရပေမယ့် သူ့ရဲ့ဇနီးသည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအစအနကို လုံးဝမကြားသိခဲ့ရပါဘူး။ လျှို့ဝှက်စွာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ချစ်ရသူဇနီးသည်အပေါ်မှာ အချိန်အကြာကြီး လွမ်းဖျားလွမ်းနာကျနေတဲ့ Tim ဟာ ညတစ်ညမှာတော့ ထူးဆန်းစွာနဲ့ အိမ်ပျက်ကြီးတစ်လုံးရဲ့အထဲမှာ နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ သူရောက်နေတာ ဘယ်နေရာလဲ? ဒါသူ့ရဲ့အိမ်လား? ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဇနီးသည်နဲ့ ဘယ်လိုမျိုး ပတ်သက်နေမလဲ? ဆိုတာကို ဂိမ်မာများကိုယ်တိုင် စတင်အဖြေရှာရတော့မှာပါ။
အိမ်ပျက်ကြီးထဲက မိန်းကလေးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်မြောက်ရာလမ်းစ
အိမ်ပျက်ကြီးထဲမှာ ရုတ်တရက် နိုးထလာတဲ့ Tim ဟာ ထွက်ပေါက်ကို အရင်ဆုံး ရှာဖွေရမှာပါ။ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ အခန်းထဲက လှေကားတန်းကနေတဆင့် အောက်တစ်ထပ်ကို ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အမှောင်အတိဖုံးပြီး လူသူအရိပ်အယောင်သဲ့သဲ့တောင်မကြားရတဲ့ အိမ်ပျက်ကြီးထဲက မိန်းကလေးက ဘယ်သူများပါလဲ? ထွက်ပေါက်ဟာဘယ်နားမှာရှိသလဲလို့ အဲဒီမိန်းကလေးကိုအကူအညီတောင်းဖို့ ရည်ရွယ်လိုက်ပေမယ့် ကံဆိုးစွာနဲ့ပဲ အဲဒီမိန်းကလေးဟာ ကိုယ့်ကို ကူညီမဲ့သူတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ခြောက်ခြားဖို့ကောင်းလှတဲ့ အိမ်ပျက်ကြီးထဲမှာ လူသားမဟုတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ ဝေဝါးတဲ့အတွေးတွေနဲ့ဂယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေတဲ့ Tim အတွက် လွတ်မြောက်ရာလမ်းစက ဘယ်မှာရှိနေတာလဲ? အခုအချိန်အထိ ဘယ်သူမှမဖော်ထုတ်ရသေးတဲ့ အနက်နဲဆုံး လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုက သွေးပျက်ဖို့အကောင်းဆုံး အမှန်တရားလား?
ရှောင်ပြေးရမယ်၊ အဖြေရှာရမယ်၊ သွေးပျက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်
နာရီပိုင်းအနည်းငယ်သာ ကြာမြင့်မယ့် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဂိမ်းဆော့နေရင်း ကြုံရမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကြားမှာ စိတ်မမွန်းကြပ်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ အကြပ်ရိုက်နေတဲ့အခြေအနေကို ရောက်ရောက် ကိုယ်ဟာတစ်ဖက်သားကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ အခြေအနေကိုသိရမယ်၊ ကိုယ်လိုရာနေရာကိုသွားဖို့ အချိန်ကိုစောင့်ရမယ်၊ တစ်ခါတလေ ပုန်းခိုရမှာဖြစ်သလို တစ်ခါတလေလည်း ရှောင်ပြေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ကျရောက်လာမယ့် သွေးပျက်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဇာတ်လမ်းတောက်လျှောက်မှာ အဖြေရှာရမယ့် ပဟေဠိတွေ၊ ဉာဏ်စမ်းတွေကို စုံလင်အောင်ထည့်သွင်းပေးထားပြီး အဲဒါတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှ ကိုယ်သွားလိုရာနေရာကို ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ Tim ရဲ့ဇနီး ဘာကြောင့်ပျောက်သွားခဲ့လဲ? ဆိုတဲ့ အဖြေကိုရှာရမှာပါ။ အခုသူရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်မိန်းကလေး၊ ပြီးတော့ အရာအားလုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်မှုနေတဲ့ အမှန်တရားတွေကို မဝေးတော့တဲ့ တစ်ချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာအောင် ကြိုးစားရမှာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဂိမ်းဖန်တီးသူများအဖွဲ့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ဖန်တီးမှု
Home Sweet Home ဂိမ်းတစ်ခုလုံးကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ဂိမ်းဖန်တီးသူအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Yggdrazil က ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဂိမ်းကို ရှေးဟောင်းထိုင်းဒဏ္ဍာရီ တစ္ဆေဇာတ်လမ်းအပေါ်မှာ အခြေခံထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဂိမ်းမှာ နာမည်ကျော် Unreal အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုထားပြီး လက်လီလက်ကား ဝယ်ယူလို့ရသလို Steam ကနေတဆင့်လည်း ဒေါ်လာ ၁၇ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူ ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိအနေနဲ့ဆိုရင် Home Sweet Home ဂိမ်းဟာ Steam review တွေအရလည်း ပြောစရာတကွက် မတွေ့ရဘဲ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းက စမ်းသပ်ဆော့ကြည့်ကြတဲ့ ဂိမ်မာတွေကလည်း လက်မထောင်ထားကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် Yggdrazil ဂိမ်းအဖွဲ့အတွက်တော့ ကျေနပ်အားရစရာပါပဲ။
ဂိမ်းတစ်လုံးမှာ ပါဝင်တဲ့ ထူးခြားချက်တွေ၊ ဆော့နိုင်မယ့်ပလက်ဖောင်းနဲ့ အနှစ်ချူပ်
ဂိမ်းတစ်ခုလုံးမှာ ကိုယ်ကျင်လည်ရမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိုင်းရိုးရာအငွေ့အသက်တွေ လွှမ်းခြုံဖန်တီးပေးထားပြီး ဇာတ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကိုယ်ကြားရမယ့် နောက်ခံစကားပြောတွေဟာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီ တစ္ဆေဇာတ်လမ်းကို အခြေခံထားပါတယ်။ ဂိမ်းကစားမှုပုံစံဟာ စိန်ခေါ်မှုအပြည့်ရှိပြီး ကိုယ့်ရဲ့လျှို့ဝှက်စွာ သွားလာနိုင်မှုအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ကွဲပြားတဲ့ဂိမ်းကစားမှုအတွေ့အကြုံတွေကို ခံစားရစေဖို့အတွက် စူးစမ်းရှာဖွေတာတွေ၊ ပဟေဠိအဖြေရှာတာတွေ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အပြင် အားလုံးထဲက အကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကတော့ VR စနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အတွက် Oculus Rift တွေကို အသုံးပြုပြီး လက်တွေ့အဆန်ဆုံး၊ ရင်ခုန်စရာ ဂိမ်းတွင်းအတွေ့အကြုံတွေကို ခံစားနိုင်ဦးမှာပါ။
လောလောဆယ်မှာတော့ ပလက်ဖောင်းအနေနဲ့ PC တစ်မျိုးတည်းမှာပဲ Home Sweet Home ဂိမ်းကိုဆော့ကစားနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပြီး နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာတော့ ပလက်ဖောင်းတွေတိုးချဲ့လာနိုင်ဖွယ်ရာရှိပေမယ့် သတင်းအစအနတော့ ဘာမှမကြားသိရသေးပါဘူး။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဟာ ကိုယ့်ဖွံဖြိုးနှုန်းနဲ့ကိုယ် ရှေ့ဆက်နေကြပေမယ့် တိုးတတ်ပြီးအနောက်နိုင်ငံများနဲ့ ယှဉ်ရင် နယ်ပယ်အချို့မှာ ခြေလှမ်းများနောက်ကျနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုနယ်ပယ်တွေထဲမှာ ဂိမ်းနယ်ပယ်ဟာလည်းအပါအဝင်ပါပဲ။ အခုလိုမျိုး ကိုယ့်နိုင်ငံရိုးရာကိုလည်း ထင်ဟပ်စေသလို နိုင်ငံတကာတန်းဝင်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုကို ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်နဲ့ လွတ်လပ်စွာဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာဂိမ်းဈေးကွက်မှာ အနေအထားတစ်ခုရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် Yggdrazil ဂိမ်းအဖွဲ့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့လုပ်ရပ်ပါပဲ။
ဘက်ပေါင်းစုံမှာစင်းလုံးချောပြီး ပြည့်စုံတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုလို့ မဆိုသာပေမယ့် အရည်အသွေးမှီတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ် ကမ္ဘာအဝှမ်းက ဂိမ်မာများတောင် လက်ခံခဲ့တဲ့အတွက် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အဲဒီလိုမျိုးဂိမ်းတစ်ခုကို အရှေ့တောင်အာရှသားတွေကိုယ်တိုင် စမ်းဆော့ကြည့်သင့်ကြောင်းကို ဒီကနေတဆင့် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
This Article is contributed by Yan.
PC Games Game PC Game Horror Horror Survival Home Sweet Home Thai Horror Game